Fijerena ny fahatelo ho an'ny fahatelo fahatelo - famantaranandro, fampidiran-danja bevohoka, fihenam-bidy, tabilao
Fandinihana ny fahatelo fahatelo - ny endri-panadihadiana rehetra
Ny fianarana mandidy amin'ny fitondrana vohoka dia ahitana ny fanaovana fitiliana amin'ny fahatelo fahatelo . Manampy amin'ny fananganana ny toe-pahasalaman'ny foetus, manombana ny tahan'ny fampandrosoana ny zazakely amin'ny ho avy, ny fikarakarana ny taova sy ny rafitra, hanafoana ny vice eo anatrehan'ny fisalasalana azy ireo.
Famerenana ny telovolana fahatelo - inona io?
Ny fehezan-dalàna fandrefesana amin'ny trimès fahatelo dia ampiasaina hanondroana ny fomba fitsaboana diagnostika izay hamaritana ny toe-pahasalaman'ny foetus sy ny taovan'ny reny. Mandritra izany fotoana izany, ny fototry ny fanaraha-maso dia amin'ny alàlan'ny ultrasound. Mandritra izany, ny dokotera dia mametraka ny mari-pamantarana ny fivoaran'ny fôtus, manombana ny fiasan'ny taova sy ny rafitra anatiny. Halalino amim-pitandremana ireo faritry ny fikambanana madinika izay mety ho fandikana.
Miaraka amin'ny ultrasound, ny fandrakofana ny fahatelo fahatelo dia ahitana ny cardiotocography sy ny dopleromerism. Ireo fianarana ireo dia manampy amin'ny famaritana ny toetry ny rafi-pandehan'ny zazakely, ny endriky ny fo. Rehefa manatontosa dokotera izy ireo dia mitazona ny fanombantombanana ny fitsaboana, dia manara-maso ny fantsona goavam-be, plasenta iray, manombana ny famatsiana ny foetus amin'ny oksizenina sy ny sakafo. Raha ilaina, dia misy vehivavy bevohoka afaka omena fitsapana ra.
Inona no asehon'ny fanadihadiana ny fahatelo fahatelo?
Ny famarotana rongony (trimestre trimestre trimestre 3) dia mametraka ny toetry ny foetus, ny haingam-pandehan'ny sehatry ny fampiroboroboana azy manokana, manilika ny fisian'ny patolojia. Amin'ny fanatanterahana ny fandaharam-pianarana, ireo mpitsabo dia mamaritra hoe:
Ny halavan'ny vatany, ny haben'ny foetus, mampitaha azy ireo ny fitsipika amin'izao fotoana izao amin'ny maha-bevohoka;
ny toetry ny sambon'ny placenta, ny tahan'ny rà ao anatin'io taova io;
miasa amin'ny taova sy ny rafi-pitantanana ny zazakely.
Cardiotocographie ny foetus
Ny fandefasana ny fahatelo fahatelo, izay omen'ny dokotera tokana, dia ahitana karyotiocography (CTG). Ny tanjon'izy io dia ny hanombanana ny halavan'ny satrobonan'ny ran'ny zazakely amin'ny oksizenina. Amin'io tranga io, ny dokotera dia manoratra ny isan'ny fitsaboana amin'ny foetus mandritra ny fialan-tsasatra sy mandritra ny hetsika . Ny fanoratana ireo famantarana ireo dia atao amin'ny fampiasana ultrasound.
Ny fo mifono ilay zaza, ny isa iray isaky ny minitra, ny fivoahana na ny fihenan-keloka miankina amin'ny fanandramana natao dia hita eo amin'ny efitranon'ny fitaovana. Ny dokotera dia mampitaha ny angon-drakitra miaraka amin'ny fampitoviana ny fitsipika ary mamintina ny fehin-kevitra. Raha misy hanoanana oksizenina mafy, izay misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny foetus, dia azo atao ny fiterahana.
Fitsaboana amin'ny alàlan'ny ultrasound 3
Miaraka amin'ny fianarana toy ny ultrasound of the foetus, ny telo volana, ny dokotera dia manombana ireo indika fa tsy ny fivoarana ara-batana fotsiny ilay zaza, fa ny asan'ny taova sy ny rafitra tsirairay ihany koa. Mandritra ny fikarakarana dia mandinika tsara ny dokotera:
ny valan 'ny tonon' ny karandoha;
Ny voka-pifidianana manokana no entina amin'ny placenta. Hoy ny dokotera:
ny toetry ny rà mandriaka;
fametrahana toerana misy ny ankizy;
ny haavon'ny placenta;
ny faharetan'ny placenta .
Ny momba ny fotoana hanaovana lesona telo ultrasound dia mianatra mialoha ny vehivavy bevohoka. Ity fianarana amin'ny daty manaraka ity dia mitodika amin'ny fandinihana ny rafitra fananahana vehivavy. Ny dokotera dia liana amin'ny toetran'ny tendrony uterine, ny rindrina, ny faharetan'ny fahamatorana (fahavononana hanatitra haingana). Amin'izany fotoana izany, ireo sanda azo raisina dia ampitahaina amin'ny soatoavina arahin'asa, ary raha misy fandikana, dia misy fianarana fanampiny. Eo an-dalam-pandinihana ireo antony mahatonga ny fanitsakitsahana.
Fetal dopplerometry amin'ny fahatelo fahatelo
Ny Doplerometry amin'ny 3 trimester dia manolotra fanombanana ny natiora sy ny haingam-pandehan'ny rà, ny fifehezana ny fantsom-bokatry ny placenta. Ity fianarana ity dia manampy ny dokotera hamaritra ny habetsahan'ny sata oxygène amin'ny ra. Raha ny fivoahan'ny indostrialy avy amin'ny fitsipika, ny dokotera dia afaka maneho aloha ny fiheverana ny rafi-pandrefesana sy ny alika. Ny fianarana dia tanterahana amin'ny milina ultrasound ary ho an'ny vehivavy dia mitovy amin'ny an'ny fanadihadiana tsotra fotsiny.
Ao anatin'ity fandinihana ity, ny rà virtoaly dia fitaovana ampiasaina amin'ny fanombanana ny toetry ny taovan'ny reny. Ampiasao amin'ny fandefasan-tsakafo biochemika telo ny votoatin'ny zavatra toy izany:
gonadotropine (hCG) chorionic human (hCG);
Ity fianarana ity dia voatendry ho an'ireo vehivavy bevohoka izay, tamin'ny fanadihadiana teo aloha, dia tsy nahafeno ny fenitra. Rehefa averina jerena ny trimestres, ny dokotera dia mamaritra ny toetra misy ny vatan'ny reny, mandinika ny tsy fetezana amin'ny fomba mandeha ara-potoana, manakana ny fahasarotana eo amin'ny fizotry ny fitondrana, ary mandray fepetra mifanaraka amin'izany.
Ahoana ny fandinihana fahatelo natao nandritra ny fitondrana vohoka?
Ny momba ny fitrandrahana ultrasound ho an'ny faha telo-telo volana, ny vehivavy dia fantatra amin'ny fianarana teo aloha, ary ny fianarana toy ny CTG sy dopplerometry dia mety miteraka tahotra ao aminy. Rehefa mitondra CTG:
Ilay vehivavy dia eo am-pandriana.
Maro ny mpamantatra napetraka ao amin'ny kibony - tandrify ody sy tratra (mamaritra ny fihenan'ny taolam-paty).
Ny dokotera dia mirakitra ny tahan'ny fo fo. Ny dingana dia maharitra 30-60 minitra.
Ny dopplerometry ny vehivavy bevohoka dia toy izao manaraka izao:
Ny vehivavy dia mihevitra ny toerana miovaova.
Ny dokotera dia ampiharina amin'ny jirom-bolo.
Ny famindrana ny fefy eo amin'ny hoditry ny hoditra, ny dokotera dia mandinika ireo fantson-dra lehibe, manombantombana ny tahan'ny rà ao anatiny. Araka ny fahatsapan'ny bevohoka indrindra, ny fomba fiasa dia tsy miavaka amin'ny alika mahazatra.
Famerenana ny fahatelo amin'ny fahatelo - daty
Raha fantatrao ny momba ny fianarana ho avy, dia matetika no liana amin'ny dokotera ny vehivavy bevohoka rehefa mijery ny 3 trimès izy ireo. Ny fotoana tsara indrindra amin'ny fampiharana azy dia 32-34 herinandro ny fitondrana. Ny fikarohana rehetra momba ny vehivavy dia tsy nahavita nandalo tao anatin'ny iray andro, noho izany dia niorina ity làlana ity. Raha voaporofo ny fitsapa-kevitry ny biochemika, dia ilaina ny mandalo izany amin'ny teny voalaza etsy ambony. Amin'izany fotoana izany, dia azo jerena aloha ny ultrasound. Tsara homarihina fa ny fandefasana ny fahatelo fahatelo, amin'ny fotoana mandany izany - dia miankina amin'ny toe-javatra manokana.
Famerenana ny fahatelo amin'ny fahatelo - fiomanana
Alohan'ny handraisana ireo fitsapana ao amin'ny telo-polo fahatelon'ny maha-bevohoka dia tokony hiomana ho azy ireo ny vehivavy. Izany dia hanafoana ny fanovana ny valin'ny vokatra, ny tahirin-kevitra azo raisina dia tsy maintsy mandanjalanja ny toetry ny vatana madinika. Na izany aza, tsy ny fianarana rehetra dia mila fanomanana aloha. Noho izany, ny ultrasound sy ny dopplerometry dia azo atao na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona. Ny fepetra tokana hanatanterahana ny ultrasound dia bala tsy misy pentina.
Mba hahazoana valiny marina amin'ny CTG, dia manoro hevitra ny dokotera alohan'ny handinihan'ny dokotera zavatra mamy. Ny fitomboan'ny glucose amin'ny rà dia hampitombo ny fiasan'ny zaza. Vokatr'izany, ny dokotera dia afaka manoratra fihetsiketsehana fetal kokoa, izay hanamarinana ny rafi-pandrefesana kardia. Ny fandehan-javatra dia haka fotoana bebe kokoa.
Rehefa voalamina ny fizarana biochemika amin'ny fahatelo fahatelo amin'ny maha-bevohoka, dia ampitandremana ny reny mitaiza ny amin'ny ilana hanarahana sakafo. Ny fandinganana ny ra dia atao amin'ny vavony tsy misy, ary 3 andro mialoha ny fanadihadiana, ireto manaraka ireto dia nesorina tamin'ny sakafo:
vokatra izay miteraka fanehoan-kevitra mahatsikaiky - cacao, citrus, sôkôla.
Famerenana ny fahatelo fahatelo - ny taham-pahalalana, tabilao
Ny dokotera ihany no tokony handinika ny vokatry ny fikarohana. Izany dia mitaky ny endri-javatra rehetra amin'ny vohoka iray manokana. Ny fivilian-tsasatra madinidinika avy amin'ny fitsipika napetraka dia tsy fanitsakitsahana, fa mety hanondro ny filàna fanaraha-maso maromaro. Fahatelo 3 trimès, ny fitsipika, ny fandikana izay tokony hohamarinin'ny dokotera, mamela anao hamaritra ny fiovàna efa misy. Eo ambany latabatra dia omenay ny soatoavin'ny fitsipi-pifanaram-paritra lehibe indrindra amin'ny fandikana ny faha telo-telo volana.
Ho an'ny firy talohan'ny fandefasana dia mandefa cork?
Entana mandritra ny fitondrana vohoka mandritra ny telo volana
Ny fahanterana ny placenta
Bevohoka 14 herinandro
Inona no lokon'ilay cork teo aloha?
Ny telo ampahatelon'ny vehivavy bevohoka dia ohatrinona?
Famolavolana efitrano misy balkon
Miasa ao amin'ny zaridaina amin'ny Septambra
Andron'ny Anjelin'i Olga
Jennifer Lopez sy Alex Rodriguez nankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany tao anatin'ny iray andro
Fanabeazana mahafinaritra - fifantenana sary amin'ny hevitra tsara indrindra amin'ny loko pastel
Inona no nofinofin'ny ondana?
Fiangonana ao St. Lazarus
Parameters avy amin'i Kara Delevin
Kitapo mialokaloka anaty multifariate
Tadio famantaranandro - lanjany